Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 wararka maanta-arlaadii.net » Qaran Bukaan Ku Dhashay oo Musuq Ka Gaarey Madaxbanaani Buuxda
Qaran Bukaan Ku Dhashay oo Musuq Ka Gaarey Madaxbanaani Buuxda
Soomaaliya waa dal weyn oo ilaahey hibo u siiyey midnimo dhan walba ah sida dhaqanka, diinta, iyo afka, laakiin ku dhaqanka barwaaqo sooranka dowladnimo midnimadaas meelna waxtar ugama yeelan. Dadka Soomaaliyeed weli waxey jecel yihiin dhaqankii miyiga oo salka ku hayey in dhinaca hogaanka lagu kala madaxbanaanaado si degaan walba uu uga madaxbanaando Soomaalida la deriska ah xataa haddii ay isku heyb yihiin: Jowhar waxey rabtaa iney Xamar ka madaxbanaanaato, sidaas si la mid ah waxaa raba Baydhabo iyo Baardheere, Boorame iyo Hargeysa, Matabaan iyo Guriceel. Doonistii gobonimada dadku waa ku mideysnayeen naceybka xukunka shisheeyaha, laakiin hiigsiga dowladnimada lagu wadaagayo xukun sokeeye weli heshiiskiisa lama hayo hanaanka iyo mabda’ lagu hanan lahaa.
Shan waxyaabood oo heykalka dowladnimada astaan u ah oo muujineysana in rabitaanka shacabkeeda ay u taagan tahay ayeysan la curan dowladnimada Soomaaliyeed.
Ismaamul Soomaaliyeed oo madaxbanaan: Xukumida dadka hogaankooda waxaa inta badan ku guuleysta xoogaga xun oo dhinaca siyaasada uga adkaada xoogaga wanaagsan, waxaana guuldarrada wadaniyiinta si qarsoodiya u maleega shisheeyaha fog. Soomaaliya waxey dhalatay iyadoo madaxda dalka loo diyaariyey ay heysteen waxbarashada dugsiga hoose ee afafka qalaad, loona diyaarin aqoonta maamulka iyo maareynta ee dowlad shacab. Waxaa dowladnimada loo fahmey in dalka dibeda laga maamulo oo dalka ay xukumaan hadba shisheeyaha iskaashiga siyaasadeed lala leeyahay sida kuwo ka mida Afrikaanka, Carabta, reer galbeedka, iyo reer bariga. Taas dalkii waxey dhaxalsiisay bukto daawadeedi noqotay in Soomaaliya arrimaheeda wax laga weydiiyo bulshada caalamka, waxqabadna iyaga keliya laga sugo. Hogaaminta dal waxaa looga tusaale qaata aqoonta, daacadnimada, iyo wadaniyada ay madaxdeedu wax ku hogaaminayaan, taasna waxaa astaan u ah kartida iyo caqliga ay leeyihiin lataliyeyaasha hogaanka dalka ku ag wareegsan. Hogaamintu waa amaano uu ilaahey iyo shacabkuba kula xisaabtamayaan cida hogaamineysa, mana jirto la xisaabtankaas meel uu ka soo geleyo qiil saamaxaya u adeegida danaha shisheeye oo madaxa loo raaricinayo.
Iskaashi Caalamiya oo lagu dulman yahay: Soomaaliya waxey dhalatay iyadoo dhulkeeda la qeybiyey tolnimana ka weysey caalamka ay ku soo biirtay oo u aqoonsaday jamhuriyad madaxbanaan, kuna soo koobay dowladnimadeeda qeyb yar oo ka mida dhulkeeda iyo dadkeeda. Horumarka madaxbanaanideeda siyaasadeed, dhaqaale, iyo dhaqan waxaa lagu dabray iskaashi u dheelinaya hal dhinac, una adeegaya maslaxada danaha shisheeyaha oo leh awooda aqoonta iyo farsamada lagu gelayo iskaashiga. Iskaashiga Soomaaliya ay la leedahay caalamka wuxuu ku saleysan yahay tuugsiga kaalmada shisheeye oo dulinimo ka dhaxashay yabooha ay danta moodey. Xeerka aan naxariista lahayn ee ka yaala cida diidan axdiga iskaashigaas lagu daboolay dhaqanka gumeysiga waxaa la marsiin saddex qorsho midkeed oo kala ah: marka hore afka ayaa laga xirin si edeb loogu yeelo oo amaan looga helo xogwarankiisa; haddii taas laga waayana dabar adag ayaa faylaha looga goyn oo dunida inteeda kale looga go’doomin; haddii intaas ay celinweyso waxaa loo diyaarin dabin qool ah oo lagu daldalo iyadoo lagu qanacsan yahay in la wada daawado. Dib u raac Soomaaliya wixii ka qabsaday badigoobka ay u gashay dhulalkeeda maqan iyo iskaashiga caalamiga mariinka cad ee uu marsiiyey.
Dhowrista xuquuqda dadka: Dowlad waxey u adeegtaa waa dadkeeda oo ay u fidiso adeegyada dowlada oo lagama maarmaanka u ah nolosha dadka sida amaanka, xaqsoorka, iyo ilaalinta sareynta sharciga. Xukuumad aan xushmayneyn xuquuqda dadka iyo hantida ay dadku sida gaarka ah u leeyihiin ma noqon karto dowlad ay dadkeedu leeyihiin dareenka biseylka iyo masuuliyadda dowladnimo,waana wax ka fog in dhaqanka dowladnimo caruurta, dhalinyarada, haweenka, iyo waayeelka in heybtooda ama mucaaradnimada dad ka tirsan beeshooda inay ku waayaan xaquuqdii ay ku lahayeen wadankooda, looguna geysto adeegsiga cududa ciidanka dalka gaboodfal ka dhan ah Soomaalinimada, islaanimada, iyo dadnimada qof ahaneed. Dowladnimada waxey dhalatay inagoo u soo xawilney hanaanka dowladnimada cadawtooyadii qabiilka ee ku dhisnaa uurdooxa haweenka uurka leh.
Sinaanta iyo Cadaalada: Dowlad wanaagsan waxaa astaan u ah garsoor ah xaqsoor oo cid walba ay u siman tahay sharciga, xaqna ay u leeyihiin iney helaan xukun caadila iyo sinaanta ay dadku u leeyihiin helitaanka adeegyada dowladda, shaqada iyo waxbarashada. Gobonimadii waxey la curatay cadaaladdarro ay xukunka ku yimaadeen xoogagii xumaa oo gumestihii u adeegayey iyo doorashooyin lagu boobayey codka dadka, taas oo ka turjumeysey dhaqankii reer guuranimada ee geela lagu kala dhacayey. Ma jirto wax ka liita in dadka codkooda kalsoonida la boobo ama la soo iibsado haddana magacooda lagu matalo dowlad dhaqan dugaaga leh. Waxaa dalkoodi lagu dulmay dad Soomaaliyeed oo la duudsiiyey xaqoodi wadaninimo, hiilana ka waayey dowladooda.
Sareynta sharciga iyo dastuurka: Wadan dowladnimadiisa buuxda waxaa lagu qiimeeya marka la helo dastuur dadku ku heshiiyeen iyo ciidan qaran oo fuliya ku dhaqanka sharciga iyo meelmarinta hawlaha loogu adeegayo shacabka. Aqoonsiga dalka waxaa curiyey dastuur been abuura oo laga soo minguuriyey Talyaaniga, waxeyna taas qiil u noqotay in dastuurku uusan noqon sharciga ugu sareeya dalka oo lagu kala baxo. Dalku haddii uusan lahayn dhaqan ilaaliya sareynta sharciga, dadka iyo dalkuba ma yeelan karaan dhaqan dowladnimo waayo dowladnimadu asal ahaan waa falkeynta qaanuunka lagu socodsiinayo. Haddii ay dhunto dhowrista dastuurka dalka u degsan wuxuu jid walba ku aroorayaa inuu ku soo dhamaado hanaqaadka dowlad si buuxda madaxbanaani uga gaartey ku dhaqanka musuq maasuqa.
Qaranimada Soomaaliyeed waxey dhalatay iyadoo bukta oo dadkii u soo halgamay diinta, dalka, iyo dowladnimada laga suuliyey inay dalkooda wax ka noqdaan, waxaana hirgashay curashada koox yar oo kaashaneysa shisheeyaha iney talada dalka isku koobto oo haya’adaha dowladda u rogtaan kuwo aan dowli ahayn oo u adeega danahooda iyo danaha shisheeyaha oo ay wakiilka ka yihiin. Waxaa siyaasado lagu faano noqotay iney abuurmaan maamulo maqaarsaara oo madaxdooda laga soo abaabuley wadamada deriska, kuwaas oo isku muujinaya iney horseedayaan helitaanka ismaamul dowladnimo Soomaaliyeed oo madaxbanaan, waxeyna ku shaqeynaya nidaam ku dhisan qof jecleysi iyo duminta xukuumado isdabajooga, ujeedadooduna ay tahay ineysan dhismin xukuumad kala xisaabtami karta boobka ay u geysanayaan hantida qaranka. Waxaa intaas wehlisa caburinta ay ku hayaan warbaahinta iyo siyaasiyiinta madaxabanaan, taas oo ay ku aamusinayaan cabirka dareenka shacabka iyo iney ku kasbadaan dad dhuuniraaca oo la wadaaga xaaranta ay shacabkooda ugu dhameynayaan badaha iyo u qixida wadamada fog si ay fursad ugu helaan in dalka loo cidleeyo ama ay dhaliyaan xaalad ay ku gaaraan in la waayo cid ka danqata dhibaatada haysata dadka iyo dalka oo la iska daawado rajo beelka ka jira dalka.
Xisbiga Dadka oo ah xubin ka mida Madasha Midnimada iyo Dimoqaraadiyada wuxuu u soo jeedinayaa shacabka Soomaaliyeed in laga qeybqaato sidii loo daweyn lahaa dowladnimada Soomaaliyeed oo aysan jirin cid si gaara u leh ama loogu eedayo mariinhabaabinteeda, waxaana hubaal ah in hadda loo baahan yahay in loo tabaabusheysto ineysan talada dalka dib ugu soo noqon koox yar oo habdhaqankeedu ku saleysan yahay kelitalisnimo ay talada dalka gacmahooda ku soo koobaan. Shacabka Soomaaliyeed wuxuu haystaa fursad uu doorasho ku gelayo 2016. Waa inaan la yeelin qiil kasta oo loo sameynayo si loogu xalaaleysto in doorashada loo qorsheeyo qaab u abaabulan in codka shacabka loo maro mariinkii lagu boobi lahaa. Waxaan rumeysanahay in la gaaray wakhtigii aan u madaxbanaan lahayn inaan doorano madaxdeena oo ku yimaada kalsoonida iyo rabitaanka shacabka, loona hiilin lahaa xoogaga wanaagsan ee doonaya in dalka uu ka dhaco isbedel suurtogelinayaa dowladnimo Soomaaliyeed oo ku dhisan ismaamul ay u madaxbanaan tahay. Shacabka Soomaaliyeed ha iska kaashado ineysan bulshada caalamka u yeerin nuuca ay u maamulanayaan ama u dhisanayaan dowladnimadooda. Madaxda maqaarsaarka ah ee wakiilka u ah u adeegida danaha shisheeye iyo kuwa deriska waa in loo guntado sidii aysan noogu soo noqon lahayn oo shacabka Soomaaliyeed looga badbaadin lahaa dhaqankooda ku dhisan dugaagnimada. Xalka mudan in lagu gaaro dowlad wanaag waa in loo midoobo in hal meel looga soo wada jeesto in dalka loogu hiiliyo siduu ku heli lahaa hogaan wanaagsan oo horseeda talo-wadaag iyo in laga kaaftoomo tuugsiga shisheeyaha, taasna waxaa horseed u ah sidii 2016ka ay u dhici lahayd doorasho xalaala oo dadku ay masiirkooda siyaasadeed si buuxda uga qeyqaataan. Doorashadu waa iney u dhacdo sida ay rabaan inta badan dadku, lana diido sida ay rabaan horjoogayaasha, bulshada caalamka, iyo kuwa deriska. Waxaan shaki lahayn haddii shacabka Soomaaliyeed ay u midoobaan doonista maslaxada ku dhisan dantooda guud iney ku guuleysanayaan gaarideeda, waxaana hubaala cida xaqa ku taagan iney ku taagan tahay dhul sal adag oo aysan ka cabsaneyn inuu la dumo.
Xisbiga Dadka wuxuu ka soo horjeeda madaxda dowlada oo ku guuldareystay hogaaminta dalka sida shaqsinimada ku saleysan oo ay u soo xuleen gudiga qabanqaabada doorashooyinka iyagoon kala tashan, kana qeybgelin talowadaaga ay mudan yihiin siyaasiyiinta ka madaxbanaan dowladda. Waxaan u aragnaa gudigaas inuusan dhexdhexaad ka ahayn loolanka siyaasadeed ee loogu tartamayo doorashada dalka ka dhaceysa 2016ka. Waxaan u soo jeedineynaa baarlamaanka Soomaliyeed ineysan ansixin gudigaas, dalkana u horseedin dagaal sokeeye oo dib ugu soo noqda, islamarkaasna ay ka hortagaan in la musuqmaasuqo qaabka la doonayo in loo diyaariyo doorashooyinka la hiigsanayo 2016ka.
Xubina ka ah Madasha Midnimada & Dimoqaraadiyada
Daawo Sawirka Maanta Ee Amin Arts Oo Uu Ku Muujiyey Wax Qabadkii Mustafa Dhuxolow
Daawo Muuqaal Culus Ciidamada Kenya Oo Laga Dilay 25 Askari Qaarka Kalana Oohin La Fariistay Cabsi Owgeed